Chirikutemesa musoro vatsigiri vemaWarriors ndechekuti vatambi vavo havasi kutamba kuzvikwata zvavo zvekunze kwenyika, uyezve varikutamba vacho, varikutatarika zvinotyisa, kwasara masvondo matatu chete, kuti mutambo uyu utambwe.
Vatsigiri ava vanoti vatambi vanga vachisimudza chikwata ichi mudenga pamitambo yakapfuura ndivo vasiri kutamba kuzvikwata zvavo kana kuti vari kutatarika.
Kaputeni wechikwata ichi Knowledge Musona ar ikukundikana kupinda muchikwata cheLockeren icho chiri pasi pasi muPremier League yekuBelgium mushure mekumboendeswa kuchi kwata ichi kwekanguva nechikwata chake chepamusoro cheAnderlecht.
Marvelous Nakamba haasi kutamba kuClub Brugge kuBelgium, zvichisanganawo naKhama Billiart uyo arikutatarika kuOrlando Pirates kuSouth Africa sezvo ari kunzi akakuvara.
Pamusoro pezvo, Tino Kadewere achagowana basa kuchikwata chisina mukurumbira cheHelsingboks kuSweden mushure mekubva kuchikwata chekuLe Havre iyo ine mukurumbira kuFrance.
Izvi mumwe muteveri wemutambo uyu VaInnocent Mutena vanoti zviri kukanda rima muchinagwa cheZimbabwe chekuenda kuma fainari e2019 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna Chikumi.
Mutsigiri weCaps United VaLloyd Sande vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Murairidzi wemaWarriors Sunday Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo uyu mangwana asi maneja wema Warriors VaWellington Mpandare vanoti Chidzambwa arikuda kutarisa vamwe vatambi vatsva McCauuley Bonne arikutamba kuEngland naKelly Lunga uyo ari kuGermany.
Asi mutsigiri wema Warriors VaHebert Mushuje vanoti izvi zvine ngozi. Munyori wezvemutambo wenhabvu VaLeopold Munhende vanoti havasi kuona maWarriors achinyanyonetseka mumutambo nema Red Devils ekuCongo uyu.
MaWarriors arikungoda poindi imwechete kubva pamutambo uyu kuti vabudirire kuenda kuAfcon.
Congo Brazzaville neLiberia dzakabatana pamapoinzi mashanu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya.